Lammiileen Itoophiyaa harki caalu 'federaalizimii akka fedhan’ qorannoon agarsiise - BBC News Afaan Oromoo
Lammiileen Itoophiyaa harki caalu 'federaalizimii akka fedhan’ qorannoon agarsiise
Obbo Muluu Takkaa
Harki caalmaan lammiilee Itoophiyaa sirna mootummaa federaalizimii akka fedhan qorannoon dhaabbata 'Afrobarometer' agarsiise.
Dhaabbatni qorannoo 'Afrobarometer' bu'aa qoranoo dhimma federaalizimii, magaalaa Finfinneefi heera biyya Itoophiyaa irratti taasise har'a baasee jira.
Dhimmoonni sadan kunneen dhimmoota ijoo waltajjii siyaasaa biyyattiirrati waggoota dheeraaf dubbii mariifi falmii ta'anidha.
Bara 1999 kan hundeeffame dhaabbatni qorannoo 'Afrobarometer' dhimmoota akka diinagdee, dimokiraasii fi siyaasa, filannoo, malaammaltummaa, miidiyaalee fi dhimmoota biroo irratti qorannoowwan taasisuun beekkama.
Bu'aa qorannoo sirna federaalizimii ilaalchisuun dhaabbatichi har'a baasen lammiileen Itoophiyaa dhibbeentaan 61 sirna bulchiinsaa federaalizimii akka deeggaran himaniiru jedha.
Kana malees, namoota qorannoo kana keessatti hirmaatan keessaa dhibbeentaan 49 federaalizimii sabummaa bu'ureeffate yemmuu deeggaran dhibbeentaan 48 immoo federaalizimii teessuma lafaa bu'ureeffate fedhu.
Fooyya'iinsa Heeraa fi Afaan Federaalaa…
Dhimmi qorannoo dhaabbata 'Afrobarometer' inni biraan heera biyya Itoophiyaa yemmuu ta'u namoota qoranicha irratti hirmaatan keessaa harki caalmaan heerri biyyattii akka fooyya'u fedhu.
Qorannichi "lammiilee Itoophiyaa 10 keessaa torba (69%) heerri biyyattii akka fooyya'u fedhu, dhibbeentaan 11 heerichi guutummaatti akka geeddaramu yemmuu barbaadan dhibbeentaan 18 immoo haaluma amma jirun akka turu barbaadu" jedha.
Dhimmoota fooyya'iinsi heeraa akka taasifamuf barbaadamu keessaa Afaan Amaaraan dabalataan afaanotni federaalaa biroon akka jiraatan gaafatan.
Gama biraatin lammiilee Itoophiyaa 10 keessaa afur (dhibbeentaan 43) heera biyyattii keessaa keewwatni 39 akka haqamu akka barbaadan gabaasa qorannoo dhaabbata 'Afrobarometer' irratti himameera.
Haa ta'u malee, lammiileen Itoophiyaa harka caalmaan (dhibbeentaan 50) keewwatni 39 akkuma jirutti akka turu barbaadu jedhame.
Keewwatni kun waa'ee mirga sabootni, sablammootni fi uummattootni hiree ofii ofin murteeffachuu hanga foxoquutti qaban hima.
Dhaabbatni 'Afrobarometer' eenyu?
Itoophiyaatti michuu dhaabbata 'Afrobarometer' fi hogganaa dhaabbata qorannoo fi gorsaa ABCON kan ta'an Obbo Muluu Takkaa, 'Afrobarometer' dhaabbata walabaa biyyaalee Afrikaa garaagaraa keessatti qorannoowwan hojjetu ta'uu himan.
'Gaaffii Afaan Oromoo akka gaafatametti deebisuu malee 'qabdii siyaasaa' gochuu hin barbaachisu'
Qorannoo dhaabbatni 'Afrobarometer' Itoophiyaatti Mudde 27 bara 2019 hanga Amajjii 2020 adeemsise irratti namootni 2,400 kan hirmaatan yemmuu ta'u namootni kunneen bifa hundagaleessa ta'een filatamuu isaanii Obbo Muluu Takkaa dubbatan.
Namootni umriinsaanii waggaa 18 ol ta'e baadiyyaaf magaala jiraatan kan hirmaatan yemmuu ta'u ragaan Ejansii Isataatiksii Itoophiyaa faayidaarra oolusaas himaniiru.
Afaan Oromoo: Gaaffiin afaan federaalaa gochuu akkuma gaafatametti deebisuu malee 'qabdii siyaasaa' gochuu hin barbaachisu'
Heera Mootummaa Itoophiyaa: Mirga foxxoquu yoomifi akkamitti